J/Dhexe:- Duqeeyn Horjoogayaal looga dilay Xagjiriinta Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
J/Dhexe:- Duqeeyn Horjoogayaal looga dilay Xagjiriinta Alshabaab
Mogadishu 29 April 2020
Wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in xalay duqeymo xoog leh ay ka dhaceen degmooyinka Bu’aale iyo Salagle oo ka wada tirsan gobolkaas.
Duqeymaha oo ahaa kuwo is xigxigay sida ay dadka ku nool magaalooyinkaas ay soo werinayaa ayaa tii u hereysay waxa ay ka dhacday xarun lagu tababarayey cutubyo ka tirsan ciidamada Al-Shabaab, taas oo ku taalla meel duleedka ka ah degmada Salagle ee gobolka Jubbada Dhexe.
Duqeymo kale ayaa ka dhacay degmada Bu’aale ee isla gobolkaas, waxayna wararku sheegayaan in gudaha iyo duleedka magaalada ilaa seddax jeer laga maqlay daryanka gantaalo culus oo ay ridayeen diyaaraduhu.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa noo sheegay in xarumaha la bartilmaameedsaday qaar lagu diyaarinayey kooxo ay Al-Shabaab doonayeen inay gobolka Banaadir weerarro uga fuliyaan inta lagu jiro bishan barakeysan ee Ramadaan.
Dhinaca kale saraal ka tirsanaa Al-Shabaab oo magaciisa lagu soo koobay Xuseen ayaa duqeymaha lagu dilay xilli sida ay xaqiijiyeen saraakishu uu gaari ku marayey duleedka degmada Bu’aale.
Sidoo kale sarakiishan waxay sheegeen in goobaha lagu bartilmaameedsaday Al-Shabaab ay ka mid tahay xarun ay ku diyaarinayeen ciidamo loo qorsheeyey inay weeraran magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Duqeymahaas waxaa ku dhintay sida ay sheegeen saraakiishu ninkii hoggaaminayey ciidamadaas oo ay magaciisa ku sheegeen Abu Fatima, sidoo kale khasaare culus ayey sheegeen in uu soo gaaray dagaalamayaashii kale iyo gadiid badan.